ကမ္ဘာ့ အဆန်းကြယ်ဆုံး တိရစ္ဆာန် (၂၅) မျိုး – အပိုင်း (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » ကမ္ဘာ့ အဆန်းကြယ်ဆုံး တိရစ္ဆာန် (၂၅) မျိုး – အပိုင်း (၂)
ကမ္ဘာ့ အဆန်းကြယ်ဆုံး တိရစ္ဆာန် (၂၅) မျိုး – အပိုင်း (၂)
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jul 4, 2011 in Entertainment |5comments
၇။ Emperor Tamarin
ကြည့်ရတာ နှုတ်ခမ်းမွှေး အဖြူကြီးတွေနဲ့ မျောက်တစ်ကောင်လိုပါပဲ။ အစကတော့ ဂျာမန် အင်ပါယာ Wilhelm II နဲ့ တူတယ်ဆိုပြီး Emperor Tamarin လို့ အမည်ပြောင် ပေးခဲ့ကြတာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ တရားဝင် သိပ္ပံနာမည် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ Amazon အနောက်တောင် မြစ်ဝှမ်း၊ ပီရူး အရှေ့ပိုင်း၊ ဘိုလီးဗီးယား မြောက်ပိုင်းနဲ့ ဘရာဇီး အနောက်ပိုင်း ပြည်နယ်တွေမှာ နေထိုင်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ Emperor Tamarin ရဲ့ အမွေးတွေဟာ များသောအားဖြင့် မီးခိုးရောင်များ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ရင်ဘတ်မှာတော့ အဝါရောင်သမ်းနေတဲ့ အပြောက်ကလေးတွေ ရှိပါတယ်။ လက်နဲ့ ခြေမွေးတွေကတော့ အနက်ရောင်တွေပါ။ သူတို့ရဲ့ အမြီးကတော့ အညိုရောင် ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ထူးခြားချက်၊ ထင်ရှားချက်ကတော့ ရှည်လျားလှတဲ့ အဖြူရောင် နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေပါပဲ။ သူတို့ဟာ သစ်တောတွေရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာ နေထိုင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ မြန်ဆန်ပြီး သိုသိုသိပ်သိပ် လှုပ်ရှားတတ်တယ်။ အဝေးကိုလည်း ခုန်ကူးနိုင်စွမ်း ရှိကြပါတယ်။ Emperor Tamarin တွေဟာ သူတို့ရဲ့ အချိန် တော်တော်များများကို သစ်ပင်တွေကြားထဲမှာပဲ ကုန်ဆုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။
၈။ White-faced Saki Monkey
မှောင်ရီစ ပျိုးတဲ့အချိန်တွေ၊ ညဘက်တွေမှာသာ ဒီလို အကောင်မျိုးကို တွေ့လိုက်မယ်ဆိုရင် သရဲဆိုပြီး ထွက်ပြေးမိမှာပါ။ သူတို့ဟာ saki မျောက်မျိုးတွေရဲ့ မျိုးစိတ်တစ်ခုပါပဲ။ White-faced Saki လို့ ခေါ်ကြသလို Golden-faced Saki လို့လည်း ခေါ်ကြပါသေးတယ်။ Saki မျောက်မျိုးနွယ်တွေကို ဘရာဇီး၊ French Guiana, Guyana, Suriname နဲ့ ဗင်နီဇွဲလား နိုင်ငံတွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ White-faced Saki ဟာ များသောအားဖြင့် သစ်သီးတွေကိုသာ စားပြီး အခွံမာသီးတွေ၊ အစေ့တွေနဲ့ အင်းဆက်တွေကိုလည်း စားကြပါတယ်။
ဝက်တွေနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူပေမယ့် နှုတ်သီးပါနေတဲ့ တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုးပါပဲ။ သူတို့ဟာ နို့တိုက်သတ္တဝါတွေပါ။ သူတို့ဟာ အမေရိက တောင်ပိုင်း ၊ အမေရိက အလယ်ပိုင်းနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှမှာရှိတဲ့ တောနက်တွေ သစ်တောတွေထဲမှာ နေထိုင်လေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ဆွေမျိုးတွေကို ပြောရမယ်ဆိုရင် မြင်းတွေနဲ့ ကြံ့တွေပါပဲ။
ပင်လယ် သတ္တဝါတစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး သိပ္ပံအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ မီဒီယာတွေကတော့ Hagfish တွေကို ပင်လယ်နေ သတ္တဝါတွေထဲမှာ ရွံရှာစရာကောင်းတဲ့ သတ္တဝါလို့ အမည်တစ်မျိုး ပေးကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရှည်လျားပြီး ချွဲကပ်နေတဲ့ အရည်တွေကို ထုတ်လွှတ်တဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေပါပဲ။
၁၁။ Star-nosed Mole
သူတို့ဟာ သေးငယ်တဲ့ မြောက်အမေရိက Mole တွေ ဖြစ်ကြပြီး ကနေဒါ အရှေ့ပိုင်းနဲ့ အမေရိကန် အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ စိုစွတ်တဲ့ မြေနိမ့်ပိုင်းမှာ နေထိုင်လေ့ရှိပြီး အင်းဆက် ပိုးမွှားတွေကို စားကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရေကူးကောင်းသူတွေလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးဟာ အနက်ရောင် အမွေးထူတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေပြီး သူတို့ရဲ့ ခြေဖဝါးတွေဟာ အလွန်ပဲ ကြီးမားပါတယ်။ အရွယ်ရောက်တဲ့ Star-nosed Mole တွေဟာ ၁၅ စင်တီမီတာ ကနေ ၂၀ စင်တီမီတာအထိ မြင့်ကြပြီး အလေးချိန်အားဖြင့် ၅၅ ဂရမ်ရှိကာ သွားကတော့ ၄၄ ချောင်း ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကောင်းပါပေ့ ဗျာ ။ မမြင်ဖူး မကြားဖူးသော သတ္တဝါ များ ကို နာမည် နဲ့ ပုံ နဲ့ တစ်ကွ တွေ့ မြင် သိ ခွင့် ရပါတယ် ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Anzartone ရေ ။
Hagfish ကပက်ကျိနဲ့ တူတယ်
နောက်ဆုံးပုံက သတ္တဝါ ကြီး က ဆန်းလိုက်တာ ….
Hagfish ပုံစံက သံကောင် တုတ်ကောင် ခေါင်း ပုံနဲ့ တူတယ် ထင်တယ်။
ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေနော ။ Tapir ကောင်ကိုတော့မြင်ဖူးတယ် . ရှားပါး စပီးရှီးတွေ ထိန်းသိမ်းဖို့လိုနေလောက်ပြီ၊ ကျေဇူး အန်စာတုံး